About us - Jinan Zhancheng ukufunyanwa okuzenzekelayo Equipment Co., Ltd.
Umoya wokwenza izinto ezintsha, ukusebenzisana kunye nomgangatho uqhuba imisebenzi yethu yemihla ngemihla. Iqela lethu elinetalente liza kunye ukuze liphuhlise kwaye lihambise iimveliso ezikhokelela kwintengiso kunye neetekhnoloji ngelixa zibonelela ngenkonzo engaguquguqukiyo kunye negqwesileyo kubathengi bethu kwihlabathi liphela. Oku kwenza ukuba iZC LASER ibe yindawo yokusebenzela enomdla.
Jinan Zhancheng ukufunyanwa okuzenzekelayo Equipment Co., Ltd yasekwa ngo-2013. Integrated i-lwasekhaya kunye nobuchwepheshe yakutshanje yaseYurophu, bahlanganisana ndawonye ezaziwayo-kakuhle laser amashishini zobugcisa amashishini 'zobugcisa kunye nolawulo lwabasebenzi.
Siphuhlise amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda womatshini wokumakisha we-laser, umatshini we-laser welding, umatshini wokusika we-laser njl. Izixhobo zethu zinempawu zembonakalo entle, ukusebenza okuzinzileyo, ubomi obude, ukusebenza ngokuchanekileyo okuphezulu, ixabiso lokhuphiswano. Ukuza kuthi ga ngoku, inkampani yethu iphumelele ngaphezulu kwe-50% yentengiso yonyaka eyonyukayo, nelilona nqanaba liphambili elizweni.
Abantu badlala indima ebalulekileyo ekufezekiseni iinjongo zethu. Sizabalazela ukusebenzisa izakhono nolwazi lwabaqeshwa bethu kwezona nzuzo zibalaseleyo zombutho. Ubuhlakani nentsebenziswano nezinye iinkampani ziphambili kwizenzo zethu.
Injongo ye-ZC Laser kukuvelisa oomatshini abakumgangatho ophezulu kunye noomatshini abakhethekileyo ngetekhnoloji ye-laser kolu shishino ngamaxabiso afanelekileyo. Ukuphuculwa kwethekhnoloji ye-laser kuya kukhuthaza ngokufanelekileyo ukuphuculwa kwemveliso, ukonga umbane, ukhuselo lokusingqongileyo kunye namanye amashishini avelayo, kwaye ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo. Siye saseka ulawulo lomgangatho ogqibeleleyo kunye nenkqubo yenkonzo emva-ukuthengiswa. Sinokubonelela ngazo zonke iintlobo zenkxaso yobuchwephesha kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa kubathengi, kwaye sinike iseti epheleleyo yezisombululo zelaser zabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya.
Inkampani yethu ibisoloko ithobela "ukujonga okuthengiswa kwimarike, ukusinda komgangatho, inkonzo yophuhliso, uphawu lobuchule kushishino, kunye nokwandisa iimarike zasekhaya nezangaphandle.